DHAGEYSO: Maalinta Haweenka Adduunka & Soomaaliya Doorkeeda | Radio Kaah
DHAGEYSO: Maalinta Haweenka Adduunka & Soomaaliya Doorkeeda
Maanta oo kale ayaa dunida looga dabaal deggaa weeneynta Maalinta Haweenka Adduunka,8 Maarso,taas oo lagu soo bandhigo Hormarka iyo Doorka Haweenka Caalamka ku leeyihiin.
28 Febraayo Sanadkii 1909-kii ayaa shirka dhacay Magaalada New York waxaa loo asteeyey inay noqoto 8 Maarso Maalin ugaar ah Hablaha Dunida loona muujiyo furaha ay u yihiin Nabada iyo Hogaanka Qoyska iyo Bulshada inteeda kale.
Soomaaliya ayaa meelo kala duwan laga xusaa Maanta oo kale,waxaana la filayaa in maanta oo Axad ah la qabto Fantasiyo iyo Dabaal degyada maalintaan iyada ah.
Xoghayaha Guud Ee Qaramada Midoobeey Antonio Gutteres ayaa Maalin ka hor ka sheegay Shirkii New York ka dhacay in isku beeqaaminta Xilalka Haweenka Mudnaayeen la duudsiiyey kuna baaqay in madaxda dalalka Dunida loogu baaqayo inay isbadel ka sameeyaan Wejigaas aan la eegi Karin.
Waxa uu soo hadal qaaday Cadaalada iyo Ceebeynta Kufsiga ugu weyn yahay aysan geynin Haweenka da’da kala duwan leh.
Wakiilka Qaramada midoobeey Ee Arimaha Soomaaliya James Swan oo ka hadlay Doorka Haweenka Soomaaliyeed Ee Dawladnimada ayaa yiri ““Haweenka Soomaaliyeed waxay waxqabad muhiim ah ka geysteen dib-u-dhiska Soomaaliya oo iyadu kusii socota tubta nabadda iyo xasilloonida” ayuu yiri Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. “Waxay muujiyeen geesinimo aad u weyn, adkeysi iyo dadaal iyagoo wajahaya caqabado badan, oo ay ku jiraan colaado daba-dheeraaday, amni darro, musiibooyin dabiici ah iyo xasillooni darro siyaasadeed.”
Danjire Swan Oo sii hadlayey ayaa ku baaqay in isbadel lagu sameeyo ka qeyb galka Haweenka dhinaca Siyaasada ““In haweenku si siman u helaan xuquuqda, fursadaha iyo ka-qaybgalka waa astaan muhiim u ah xaqiijinta ajandaha horumarinta qaran ee Soomaaliya,” ayuu yiri Md. Swan. “Taas waxay ku imaan kartaa oo kaliya tallaab wadareed ay qaadaan dhamaan dadka, oo ay ku jiraan dadka talada haya.”
Dunida ayaa isku raacsan inay Haweenku yihiin kuwa ugu muhiimsan Ee Mujtamaha laf dhabar u ah,Bulshadana iftiin unoqda markii si sax ah uyihiin kuwo udhego nuglaada oo Xaqa ay mudan yihiin la siiyo,balse waxaa Caalamka ku dhibaateysan Haween qaarkood xad gudub Jir ahaaneed iyo mid kaleba loo geystay.
Previous Article Dagaal Al Shabaab & Dawlada Ku Dhexmaray Xalay Duleedka Balcad
Next Article DHAGEYSO: Warka Subax Radio Kaah (8-3-2020)